Iwashi Lomklami Wezitolo Ezithengisa Izimpahla - Amawashi Asezitolo Ezidayisa Kanokusho
Inani eliphansi: €0.00
IYurophu - eLatvia, eRiga (endlunkulu)
Eshiya - Hong Kong, Cosco Tower, 183 Queen Road Central, Sheung Wan
Inkampani esemthethweni ye-EU
Emafektri eYurophu nase-Asia
Amanani wokuncintisana asezingeni eliphakeme
Izinto ezingaphezu kwama-20 000 esitokweni
Bangaphezu kuka-4 000 onobuhle ezahlukene
Amamodeli wakamuva ahlala esitoko
Inani elincane le-oda lingu-400 EUR
Ukuthengisa kuze kufike ku-85% kusuka ku-RRP
Ngemva yokuthengisa service
Isixazululo esihle kakhulu sezinto emhlabeni jikelele
Izinketho eziningi zokukhokha
Wonke amawashi ayiqiniso 100%. Zizwe ukhululekile ukwenza isampula ye-oda futhi ulethe izinto komele umkhiqizo ukuze uthole ubuchwepheshe.
Ukuze ubuyekeze isitokwe onobuhle wethu wamanje, sicela Yenza i-akhawunti futhi uvakashele Ikhasi lezitolo. Ngeminye imininingwane, zizwe ukhululekile Xhumana nathi.
Amapulatifomu ethu Amakhulu
Amawashi ama-Wholesale - Ama-Brand Designer Anethezeka
I-TicDistribution.com iwumphakeli wewashi eliwukudayisela elidume kakhulu amawashi womklami womklami. Zethu wholesale umklami amawashi izixazululo zokuhweba zingafinyelela ku Isaphulelo esingu-80% kusuka MSRP (intengo ephakanyisiwe yokuthengisa). Sisebenza emakethe yamawashi yamazwe omhlaba jikelele, esebenza ngokukhethekile amawashi wesikhathi womkhiqizo womklami. Amahhovisi ethu atholakala e- IYurophu neHong Kong.
I-Wholesale Designer Brand Watches Solutions
Singumhlinzeki wamawashi atholakalayo atholakalayo ekukhetheni okuningi kwemikhiqizo, kufaka phakathi I-Armani Exchange, Burberry, Calvin Klein, CLUSE, Daniel Wellington, Diesel, Emporio Armani, Fossil, Guess, Hugo Boss, Marc Jacobs, Maserati, Michael Kors, Tissot futhi Tommy Hilfiger. Ngenxa uthenge kusuka abaphakeli bethu obuningi, amanani ethu ahlale sahlulwa. Lawa mawashi ahambisana ngokuphelele nebhokisi lesethulo soqobo, omaki bobuqiniso, imiyalo nezincwajana zewaranti.
Lawa mawashi emfashini kanokusho aqukethe izinhlobonhlobo zamamodeli, izitayela, ukunyakaza, amabhande, izinto zokwakha, imisebenzi, nemibala ukuze ifaneleke kahle kokubili kwabesilisa nabesifazane. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe kuhlelo lwethu lokusebenza amawashi wegama lomkhiqizo izixazululo, vakashela zethu ikhasi lomkhiqizo. Uzothola ukuthi sithengisa kuphela iqoqo elidumile lamawashi athandwa kakhulu phakathi kwabathengi.
Noma sinikezela ngempahla yethu ngesaphulelo esikhulu kusuka ku-MSRP, ungaqiniseka ukuthi wonke amawashi ethu angamaqiniso futhi ayemisha sha. Abaningi abasabalalisi abathengisa ngezinto eziningi bazama ukukhulisa ukuthengisa kwabo ngokukhulisa ubuncane be-oda ngaphezu kwamazinga ajwayelekile. Inani lethu elincane le-oda lingu-500 USD kuphela. Ngenxa yalesi sizathu, ngisho nezitolo ezincane ze-inthanethi zingathenga amawashi ngenani eliphelele ngokuncintisana wholesale amanani. Uma sesazi iklayenti ngalinye ngamunye, singanikeza izaphulelo ezihlukile ngokuya ngesimo sabo.
Sinikeza iwaranti futhi service professional emva-yokuthengisa. Umgomo wethu ukwakha ubudlelwano bebhizinisi besikhathi eside. Amawashi wethu wokuqamba aqhamuka emikhiqizweni yemfashini athengisela ngokushesha futhi anenzuzo enkulu. Siyaziqhenya ngokuthi isibalo samakhasimende ethu sikhula eminyakeni yethu yokusebenza.
Ungawathenga kuphi amawashi ngobuningi besamba? - TicDistribution.com
Sibusisiwe ngokuba nobudlelwano obufanele iminyaka eminingi namakhasimende ethu - ophathina bokuthengisa esibahloniphayo nababazisayo. Inkolelo yethu ukusebenza namakhasimende ethu njengeqembu elilodwa, ngoba njengoba impumelelo yethu incike ngqo empumelelweni yabo.
Amakhasimende ethu aphesheya nawasekhaya Retailers, izitolo zokuhlobisa ubucwebe nezitolo eziku-inthanethi njenge EBay, Rakuten, Ngokombelok.nl, Jet.com, I-Yahoo Japan, nezinye eziningi. Sinikeza isaphulelo esikhulu esivela ku-MSRP - kufika ku-80%, ukuze ukwazi ukuncintisana ngempumelelo emakethe yokuthengisa.
Lapho uba ngumsebenzisi we-TicDistribution.com, unikeze umuntu uqobo ukufinyelela kumklami we-brand wholesale watches B2B ozonikeza ibhizinisi lakho amandla okukhula angenamkhawulo. Sineengcweti ezihlakaniphile kulo mkhakha, futhi ungaqiniseka ukuthi sizosiza ibhizinisi lakho ukukhulisa nokunwebeka.
Eminyakeni yethu eminingi yokuhlangenwe nakho, sizakhele idumela lokuba umsabalalisi wamawashi aphambili onokwethenjelwa nonokwethenjelwa kozakwethu abaningi emhlabeni jikelele. Sikholelwa ukuthi isevisi enhle kakhulu nokuxhumana kuyizinsika zokubambisana okuphumelelayo.
Izimakethe zethu eziphambili zokuthumela ngaphandle yiYurophu, i-Asia, i-USA, Middle East kanye ne-UK.
Ngeminye imininingwane, zizwe ukhululekile Xhumana nathi.
Lawa mawashi enziwa kusetshenziswa ubuchwepheshe obufakazelwe nabusunguliwe. Ngokuya ngemodeli yokubuka, ifakwe i-quartz enembile kakhulu iwashi kagesi ukunyakaza (ngebhethri) noma iwashi elizenzakalelayo ukunyakaza (ukuzilolonga). Izinzuzo zokunyakaza kwe-quartz konke ukuthembeka nokunemba. Abanye ukunyakaza kwewashi kukhona Kwenziwe eSwitzerland, ezinye zenziwa eJapan noma eChina.
Imichilo yokubuka yenziwa Isikhumba sangempela noma i-nylon. Namasongo okubuka enziwe insimbi engagqwali, i-ceramics noma ipulasitiki, kuya ngemodeli. Ubuso bewashi buvikelwe yikristali enamaminerali kanzima.
Amawashi afakwe ukubonisa kwe-analogue, ukukhombisa kwedijithali kanye nenhlanganisela yakho yomibili. Amamodeli amaningi wokubuka afaka i-chronograph, usuku, nokudayela okungaphakathi okubonisa imizuzwana engama-60, imizuzu engama-60 namahora angama-24. Amanye amamodeli wokubuka anakho elinesisindo izici. Izitayela zezinombolo zifaka zombili izinombolo zesi-Arabhu nezamaRoma.
Ukumelana namanzi imvamisa isuka kumabha amahlanu kuya kwayi-5 (ATM), kuya ngemodeli.
•#1 Umthengisi wewashi elidayisa yonke impahla •Imibuzo Evame Ukubuzwa •Imigomo Yesevisi •Inqubomgomo yobumfihlo •Cookie yemfihlo •lobulungu Indawo
Amawashi Omklami wase-Wholesale - eHong Kong
Inkampani: I-SIA KURJERS - i-Europe (Latvia)
Inombolo ye-VAT: LV44103074131
I-copyright © 2017-2021 www.ticdistribution.com
Bhalisela iphephandaba lethu futhi wamukele I-15% isephulelo ku-oda lakho lokuqala
Sithumela amaphromoshini ngezikhathi ezithile kanye nezindaba ezibalulekile. Abekho ugaxekile!
www.ticdistribution.com isebenzisa amakhukhi ukuqinisekisa ukuthi sikunikeza isipiliyoni esihle kuwebhusayithi yethu. Uma uqhubeka sithatha ukuthi uyavuma ukwamukela wonke amakhukhi kwiwebhusayithi yethu.
Funda yethu inqubomgomo yekhukhi.